Madaxweyne Trump oo diiday inuu cadeeyo mowqifkiisa doorashada soo socota ee Mareykakanka | Somalisan.com
Home Afsomali Madaxweyne Trump oo diiday inuu cadeeyo mowqifkiisa doorashada soo socota ee Mareykakanka
Madaxweyne Trump oo diiday inuu cadeeyo mowqifkiisa doorashada soo socota ee Mareykakanka
Trump oo wareysi siinayey telefishinka Fox ayaa la weydiiyey inuu aqbali doono natiijada hadii uu doorashada Madaxweynaha uga guuleysto ninka la tartamaya ee xisbiga Dimuquraadiga Joe Biden.
Xafiiska Joe Biden oo ka jawaabaya diidmada Donald Trump ayaa sheegay in Dalka Maraykanka uu shuruuc leeyahay, isla markaana ay Shacabka dooran doonaan.
Madaxweynahooda, cidii isku dhajisa Aqalka Cad in banaanka looga tuuri doono.
Donald Trump ayey taageeradiisa hoos usii dhaceysay tan iyo horaantii sanadkan, waxayna dad badan ku dhaliilayaan qaabkii uu u wajahay kahor taga cudurka Covid19 oo xiligan faro-ba’an ku haya dalka Maraykanka.
Next articleHay’adda Hormuud Salaam Foundation Oo Gargaar Gaarsiisay Barakacayaal DAAWO SAWIRADA )
kenya oo burburisay xaruntii 10aad ee shirkada isgaarsiinta hormuud iyo magacyada deegaanada ay ku...
Alshabaab oo xalay bambooyin iyo qaraxyo la dhacay Magaalada baydhabo oo ay ku shirsan...
Somalisan News - September 5, 2020